September 1, 2021 N88LeaveaComment on कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका क्रममा निधन
काठमाडौँ । मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको निधन भएको छ । उपचारका क्रममा बुधबार साँझ ६:५१ बजे घिमिरेको निधन भएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्भिकले गरेका सबै प्रयासका बाबजुद मोडल घिमिरेको निधन भएकोमा दु:ख व्यक्त गरेका छन् । दुर्घटनामा घाइते भएकी निशालाई गम्भीर अवस्थामा घरमै रहेका […]
अब देउवा बाट देश चल्दैन – प्रचण्ड
September 1, 2021 N88LeaveaComment on अब देउवा बाट देश चल्दैन – प्रचण्ड
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीनै देशमा पहिलो पार्टी भएर नआउँने बेलामा देश यस्तै भइरहने र अहिले बनेको देउवा सरकार बाट केही नचल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । आफुलाई राजनितीको माहिर खेलाडी ठान्ने र नेपालको राजनिती आफ्नै वरिपरी घुमिरहेको छ भन्ठान्ने प्रचण्डले अहिलेको परमादेश बाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाट पनि […]
हात्तीवनमा वर्षाले किनिन् साढे २ करोडमा अपार्टमेन्ट
September 1, 2021 N88LeaveaComment on हात्तीवनमा वर्षाले किनिन् साढे २ करोडमा अपार्टमेन्ट
काठमाडाैं । नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुको जीवनशैली फेरिदो छ । महंगा गाडी र अपार्टमेन्ट खरिद गर्दै कलाकारहरु आनन्दको जीवन विताउन चाहन्छन् । केही हप्ता अगाडि मात्र गायक प्रकाश सपुत, नायिका पूजा शर्मा, नायक आकाश श्रेष्ठ, कलाकार जितु नेपालले महंगो रककमा कार खरिद गरेका थिए । अब, नायिका वर्षा सिवाकोटीले महंगो रकममा अपार्टमेन्ट खरिद गरेकी छिन् । […]
खुसीकाे खबर : काठमाडाैंमा फिल्म हल खुल्ने
September 1, 2021 N88LeaveaComment on खुसीकाे खबर : काठमाडाैंमा फिल्म हल खुल्ने
काठमाडाैं । थप खुकुलो बनाउँदै काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ। १६ भदौमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को बैठकले भदौ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको भए पनि भोलि अर्थात् १७ भदौदेखि सिनेमा घर, जिमखाना, ब्यूटी पार्लर, स्वीमिङ पुल लगायत खुल्ने भएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद […]
सभामुख सापकोटा जे’ल जाने निश्चित, जन्मकै’द हुनसक्ने बढ्ता चुरीफुरी देखाउँदा अग्नी अब खरानी !
September 1, 2021 N88LeaveaComment on सभामुख सापकोटा जे’ल जाने निश्चित, जन्मकै’द हुनसक्ने बढ्ता चुरीफुरी देखाउँदा अग्नी अब खरानी !
काठमाडौं । स’श’स्त्र द्व’न्द्व’का’लमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ह’त्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका सभामुख अ’ग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मु’द्दा आजका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सापकोटावि’रु’द्धको मु’द्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमा संवैधानिक इजलासमा पहिलो नम्बरमा राखेको छ । करिब १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन उक्त मु’द्दा हालसम्म २० पटक पेसीमा तोकिए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन […]
नेपाली कांग्रेसमा गुटैगुट, कुन गुट कति बलियो हेर्नुस् कसकसकाे छ गुटबन्दी
September 1, 2021 N88LeaveaComment on नेपाली कांग्रेसमा गुटैगुट, कुन गुट कति बलियो हेर्नुस् कसकसकाे छ गुटबन्दी
काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्र गुट उपगुट सक्रिय भएका छन्। महाधिवेशनबाट आफू कसरी स्थापित हुने र नेतृत्व हात पार्ने भनेर शीर्ष नेताहरू नै गुट बनाउन थालेका छन्। १३औं महाधिवेशनसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको गुट गरी ३ गुट सक्रिय थियो। तर, १४औं महाधिवेशन आउँदै […]
दुई गाउँ अझै श्री ५ कै नाममा
September 1, 2021 N88LeaveaComment on दुई गाउँ अझै श्री ५ कै नाममा
काठमाडौं । मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको १३ वर्ष भयो। तर, गोरखा र धादिङका हजारौं रोपनी जग्गा जमिनको धनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ छ। पुस्तौंदेखि किसानले कमाई आएको जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको लालपुर्जामा जग्गाधनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ अंकित छ। पुस्तौंदेखि किसानले खेती गर्छन्, कर तिर्छन्। तर, स्वामित्व भने अझै पाएका छैनन्। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–३ र ४ […]